समाचार - बोट दक्षता बढाउन पाँच साना परिवर्तनहरू
०868686 + ०7676 + + 29 २। 88११
IE1 तीन चरण असिंक्रोनस मोटर
IE2 तीन चरण असिंक्रोनस मोटर
IE3 तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
एमएस एल्युमिनियम शेल तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
रूसी मानक मोटर (सानो बेस उच्च पावर)
गियर रिडुसरको लागि तीन चरणको एसिन्क्रोनस मोटर
पाइप पम्पको लागि तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
ढु stone्गा मेसिनरी र काठको मेशीनका लागि तीन चरण असिन्क्रोनस मोटर
पानी-कूल्ड तीन चरण असिंक्रोनस मोटर
YB3 फ्लेमप्रूफ तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
YD2 बहु-चरण चर गति तीन-चरण असिंक्रोनस मोटर
YEJ2 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेकिंग थ्री-फेज असिंक्रोनस मोटर
YVP चर आवृत्ति गति तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
वाईएक्सपी तीन-चरण एसिन्क्रोनस मोटर उच्च तापमान आगो फायर फाइटिंग र धुवाँ निकासको लागि
शीतलक टावर मोटर
बोट दक्षता बढाउन पाँच साना परिवर्तनहरू
दस बर्ष भन्दा बढीमा एक इलेक्ट्रिक मोटर चलाउन ऊर्जा लागत मूल खरीद मूल्य कम्तिमा times० गुणा छ। सम्पूर्ण जीवन लागतको विशाल बहुमतको लागि जिम्मेवार ऊर्जा खपतका साथ, मोटर र ड्राइभ निर्माता, डब्ल्यूईजी, का Marek Lukaszczyk मोटर मोटर दक्षता सुधार गर्न पाँच तरिकाहरू बताउँछ। धन्यबाद, एक बोटमा परिवर्तन बचत गर्न ठूलो हुन छैन। यी परिवर्तनहरू मध्ये धेरै तपाईंको अवस्थित पदचिन्ह र उपकरणहरूको साथ काम गर्दछ।
प्रयोगमा धेरै इलेक्ट्रिक मोटर्स या त कम दक्षता हुन् वा अनुप्रयोगको लागि उचित आकारको छैनन्। दुबै मुद्दाहरूको परिणामस्वरूप मोटर्सले उनीहरूको लागि कडा मेहनतको लागि परिश्रम गर्दछ, प्रक्रियामा बढी ऊर्जा प्रयोग गरेर। त्यस्तै गरी, पुरानो मोटर्स मर्मतको समयमा केहि पल्ट उल्टो हुन सक्छ, उनीहरूको दक्षता कम।
वास्तवमा, यो अनुमान गरिएको छ कि प्रत्येक चोटि मोटरमा एक वा दुई प्रतिशत दक्षता गुमाउँछ। किनभने ऊर्जा खपत मोटरको कुल जीवन चक्र लागतको per cent प्रतिशत हो, एक प्रीमियम दक्षता मोटरको लागि अतिरिक्त भुक्तान गर्दा यसको जीवनकालमा लगानीको परिणाम हुनेछ।
तर यदि मोटरले काम गरिरहेको छ, र दशकौंसम्म काम गरिरहेको छ, के यसलाई अपग्रेड गर्न समस्या भइरहेको छ? सही मोटर आपूर्तिकर्ताको साथ, स्तरवृद्धि प्रक्रिया विघटनकारी छैन। एक पूर्व परिभाषित तालिकाले मोटर एक्सचेन्जको चाँडै र कम से कम डाउनटाइमको साथ गरिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। उद्योग मानक फुटप्रिन्टहरूको लागि विकल्पले यस प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ, किनकि फ्याक्ट्री लेआउटमा परिवर्तनको आवश्यक्ता पर्दैन।
स्पष्ट रूपमा, यदि तपाईंसँग तपाईंको सुविधामा सयौं मोटर्स छन् भने, तिनीहरूलाई एकै पटकमा प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन। मोटर्सहरू लक्षित गर्नुहोस् जुन पहिले रिवाइन्ड हुन्छन् र महत्वपूर्ण डाउनटाइमबाट बच्न दुई वा तीन बर्षमा प्रतिस्थापनको तालिका बनाउँदछन्।
मोटर प्रदर्शन सेन्सर
मोटर्सलाई उत्तम रूपमा चल्नको लागि, प्लान्ट प्रबन्धकहरूले retrofit सेन्सरहरू स्थापना गर्न सक्दछन्। रियल-टाइममा कम्पन र तापमान अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण मेट्रिक्सको साथ, भविष्यवाणी गर्ने रखरखाव एनालिटिक्समा निर्मित विफलता अघि भविष्य समस्याहरू पहिचान गर्दछ। सेन्सरमा आधारित अनुप्रयोगहरूको साथ मोटर डाटा झिकिन्छ र स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा पठाइन्छ। ब्राजिलमा, एउटा उत्पादन प्लान्टले यस प्रविधि चार मोटर उड्ने मशीनहरूमा चार समान एयर रीक्रिकुलेटिंग मेशिनहरूमा लागू गरेको थियो। जब मर्मत टोलीले सतर्कता प्राप्त गर्‍यो कि एकले स्वीकार्य थ्रेसोल्ड भन्दा उच्च कम्पन स्तरहरू छन्, तिनीहरूको बढि सतर्कताले उनीहरूलाई समस्या समाधान गर्न सक्षम गर्दछ।
यो अन्तरदृष्टि बिना, अनपेक्षित कारखाना बन्द हुन सक्छ। तर माथि उल्लिखित परिदृश्यमा उर्जा बचतहरू कहाँ छन्? सर्वप्रथम, बढाइएको कम्पनले ऊर्जा प्रयोग बढाउँदछ। ठोस एकीकृत खुट्टे मोटरमा र राम्रो मेकानिकल कठोरता कम कम्पनको ग्यारेन्टी गर्न महत्वपूर्ण छ। गैर-इष्टतम प्रदर्शन द्रुत रूपमा समाधान गरेर, यस खेर जाने ऊर्जा कम से कम राखिएको थियो।
दोस्रो, पूर्ण कारखाना बन्द हुनबाट रोक्दै, सबै मेसिनहरू पुन: सुरु गर्न उच्च ऊर्जा आवश्यकताहरू आवश्यक पर्दैन।
नरम सुरु गर्नुहोस्
मेशिनहरू र मोटर्सहरूको लागि जुन लगातार चल्दैन, प्लान्ट प्रबन्धकहरूले सफ्ट स्टार्टर स्थापना गर्नुपर्दछ। यी उपकरणहरूले अस्थायी रूपमा लोड ट्रेन र लोड मा टार्क कम र स्टार्ट-अपको क्रममा मोटरको इलेक्ट्रिक वर्तमान बृद्धि।
यसलाई रातो ट्राफिक बत्तीमा भएको जस्तो सोच्नुहोस्। जब तपाई आफ्नो खुट्टा ग्यास पेडलमा तल स्लेम गर्न सक्नुहुन्छ जब प्रकाश हरियो हुन्छ, तपाइँलाई थाहा छ यो ड्राइभ गर्न असक्षम र मेकानिकल तनावपूर्ण तरिका हो - साथै खतरनाक पनि।
त्यस्तै, मेशिन उपकरणहरूका लागि, एक ढिलो सुरूवातले कम उर्जा प्रयोग गर्दछ र मोटर र शाफ्टमा कम मेकानिकल तनावमा परिणाम दिन्छ। मोटरको जीवनकालमा, एक नरम स्टार्टरले कम लागत लागतलाई जिम्मेदार बचत बचत प्रदान गर्दछ। केहि नरम शुरुआतहरू स्वत: ऊर्जा अनुकूलन मा निर्माण गरेका छन्। कम्प्रेसर अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श, सफ्ट स्टार्टर लोड आवश्यकताहरूको न्याय गर्दछ र न्यूनतम ऊर्जा खर्च राख्नको लागि तदनुसार समायोजन गर्दछ।
एक चर गति ड्राइभ (VSD) प्रयोग गर्नुहोस्
कहिलेकाँही भ्यारीएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव (VFD) वा इन्भर्टर ड्राईभको रूपमा संदर्भित, VSD हरू अनुप्रयोग आवश्यकताको आधारमा इलेक्ट्रिक मोटरको गति समायोजित गर्दछ। यो नियन्त्रण बिना, प्रणाली केवल ब्रेक गर्दछ जब कम बलको आवश्यक हुन्छ, व्यर्थ उर्जा तापको रूपमा बाहिर निकाल्दै। उदाहरणका लागि फ्यान अनुप्रयोगमा, VSD हरू आवश्यकता अनुसार हवाको बहाव कम गर्दछ, अधिकतम क्षमतामा बाँकी रहँदा मात्र एयरफ्लोलाई काट्ने भन्दा।
एक VSD एक सुपर प्रीमियम दक्षता मोटर संग जोड्नुहोस् र कम ऊर्जा लागतहरु आफैं बोल्नेछन्। उदाहरणका लागि कूलि tower टावर एप्लिकेसनहरूमा, W22 आई super सुपर सुपर प्रिमियम मोटर प्रयोग गरी CFW701 HVAC VSDwhen सही आकारमा, properly०% सम्मको ऊर्जा लागत कटौती र औसत २२% पानी बचत प्रदान गर्दछ।
जबकि वर्तमान नियमनले भन्छ कि IE2 मोटर्स एक VSD को साथ प्रयोग गर्नु पर्छ, यो उद्योग भर लागू गर्न गाह्रो भएको छ। यसले नियमहरु कडा हुँदै गएको कारण वर्णन गर्दछ। जुलाई १, २०२१ सम्म, तीन चरण मोटर्सले IE3 मापदण्डहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्दछ, कुनै पनि VSD थप नगरी।
२०२१ परिवर्तनले पनि VSD हरूलाई उच्च मापदण्डमा समाहित गर्दै, यो उत्पादन समूह आईई रेटिंग्स पनि प्रदान गर्दै। तिनीहरू आईई २ मापदण्ड पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, यद्यपि आईई २ ड्राइभले आईई २ मोटरको समान क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्दैन - यी छुट्टै रेटिंग प्रणाली हुन्।
VSDs को पूर्ण प्रयोग गर्नुहोस्
VSD स्थापना गर्नु एक चीज हो, यसलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्नु अर्को कुरा हो। धेरै VSD हरू उपयोगी सुविधाहरूले भरिएका हुन्छन् जुन बोट प्रबन्धकहरू अवस्थित छैनन्। पम्प अनुप्रयोगहरू एक राम्रो उदाहरण हो। फ्लुइड ह्यान्डलिंग अशांत हुन सक्छ, चुहावट र कम तरलताको तहको बीचमा, त्यहाँ धेरै गल्ती हुन सक्छ। बिल्ट-इन नियन्त्रणले उत्पादन मागहरू र तरलताको उपलब्धतामा आधारित मोटर्सको अधिक प्रभावी प्रयोग सक्षम गर्दछ।
VSD मा स्वचालित भाँचिएको पाइप पहिचानले तरल चुहावट क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्दछ र तदनुसार मोटर प्रदर्शन समायोजित गर्दछ। थप रूपमा, सुख्खा पम्प पहिचानको अर्थ यदि तरल पदार्थ सकियो भने मोटर स्वत: निष्क्रिय हुन्छ र सुख्खा पम्प सचेत जारी हुन्छ। दुबै केसहरूमा, मोटरले आफ्नो उर्जा खपत कम गर्दछ जब उपलब्ध श्रोतहरू चलाउन कम ऊर्जा आवश्यक पर्दछ।
यदि पम्प अनुप्रयोगमा बहु मोटर्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, जाकी पम्प नियन्त्रणले विभिन्न आकारका मोटर्सको प्रयोगलाई पनि अनुकूलित गर्न सक्छ। यो हुन सक्छ कि मागको लागि केवल एक सानो मोटर प्रयोगको लागि आवश्यक पर्दछ, वा सानो र ठूलो मोटरको संयोजन। पम्प जीनियसले दिएको प्रवाह दरको लागि अधिकतम आकारको मोटरको प्रयोग गर्न बढ्दो लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
VSD हरू मोटर इम्पेलरको स्वचालित सफाई पनि गर्न सक्दछ, सुनिश्चित गर्न को लागी Deragging लगातार गरिन्छ। यसले मोटरलाई इष्टतम अवस्थामा राख्छ जसले ऊर्जा दक्षतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
यदि तपाईं एक दशकमा उर्जा बिलमा times० गुणा मोटर मूल्य तिर्न खुशी हुनुहुन्न भने, यी परिवर्तनहरू गर्ने समय आएको छ। तिनीहरू एकै रातमा हुने छैनन्, तर एक रणनीतिक योजना जुन तपाईंको सबैभन्दा असक्षम पेन पोइन्टहरूलाई लक्षित गर्दछ यसले महत्वपूर्ण ऊर्जा दक्षता लाभमा परिणाम दिनेछ।
पोष्ट समय: नोभेम्बर ० -20 -२०२०
शgs्ग्सिकियान औद्योगिक पार्क, लुओयang्ग, लुकियाओ, टाइजो झेजियांग चीन